» संसद विघटन उचीत या अनुचीत ? अनौपचारीक अन्तवार्ता उप्रेतीसँग -MAKWANPUR NEWS
संसद विघटन उचीत या अनुचीत ? अनौपचारीक अन्तवार्ता उप्रेतीसँग -MAKWANPUR NEWS
१४ माघ २०७७, बुधबार ०८:५८
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा)का मनहरी गाउँ कमिटी सचिव हेमलाल उप्रेतीसँग यात्राको क्रममा गरीएको अनौपचारीक तर यथार्थपरक राजनितीक सम्वाद :
नोट : प्रश्नउत्तरमा राजनितीक भन्दा पनि आम मानीसले बुझ्ने प्रष्ट नेपाली सामान्य बोलीचालीको भाषाशैली प्रयोग गरीएको छ :
पार्टि फुट्यो रे भन्छन नी सचिवज्युु , साँच्चै फुट्या हो र ?
पार्टि भन्दा पनि पहिला पार्टिका कार्यकर्ताहरु फुटे । पार्टि त आधिकारीक रुपमा फुटिसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि नफुट्नु भनेको छ क्यारे । बाँकि सब माथी हुनेको हातमा छ अब ।
राजनीती भन्ने चिज पनि बढो अचम्मको हुँदो रैछ है सचिवज्यु । केन्द्रमा फुट्ने बित्तीकै एउटा वडाको पनि सानो टोलमा समेत फुट्नै पर्ने । आफ्नै दाजुभाइ नै भएपनि पानी बाराबार हुन्छ । यो त मुर्खता भएन र सचिवज्यु ?
मुर्खता भन्दा पनि पहिला यो कुरा बुझ्नुस कि पार्टि भनेको नै सिद्धान्त हो । जव सम्म सबैको धारणा र सिद्धान्त एउटै हुन्छ तबसम्म सबै एउटै पार्टिमा अटाउँछन् । पछि बिचार फरक फरक हुँदै जान्छ र सिद्धान्तको दुरी पनि बढ्दै जान्छ । अनि दुइवटा फरक फरक सिद्धान्त बोकेकाहरु एउटै समुह अथवा पार्टिमा कसरी अटाउँछन् त ? त्यसैले पार्टि फुट्नुको कारण मुख्य त यहि नै हो । यो त केन्द्रको सन्दर्भ भयो । स्थानीय स्तरमा पनि केन्द्रीय तहका नेताहरुसँगको सिद्धान्त मेल खाएर नै कुनै पनि कार्यकर्ताहरुले समर्थन गर्ने हुन् । जब एकाएक सिद्धान्त नै विभाजन हुन्छ भने नेता कार्यकर्ता विभाजन हुनु स्वाभाविकनै भइहाल्यो नि । यसलाइ मुर्खता भन्न मिल्यो त अब ?
तर सचिवज्यु , भोली गएर एकाएक केन्द्रका नेताहरु मिले भने , कार्यकर्ता फेरी एक भएर अघि बढ्लान त ? अथवा यो कार्यले पार्टिको विश्वसनियतामा थोरै घाटा पर्दैन र ? तेस्रो पक्ष वा पार्टिले फाइदा उठाउने सम्भावना पनि बढि हुन्छ नि हैन ?
त्यो त हुन्छ नै । राजनिती भनेकै सम्भावनाको खेल न हो । त्यो आ आफ्नो विचारमा भर पर्ने कुरा भयो । तिनलाइ अवशरवादि भनिन्छ । जहाँ अवशर बढि देखियो उतै लर्किने पनि हुन्छन् कोहि । तर जिवनभर पार्टिको जस्तोसुकै अवश्थामा पनि साथ दिएर कठ्ठर कम्युनिष्ट भन्नेहरु पनि त छन् नि । सके आन्तरीक द्धन्दलाइ निकर््यौल गर्ने ,नसके पनि साथ छोड्दिन भनेर अडिक रहने कार्यकर्ताहरु पनि यहि समाजमा छन् । वास्तवमा कठ्ठर कम्युनिष्ट भनेकै तिनिहरु हुन् । अनि अर्को कुरा ,फेरी एक भएर अघि बढ्न पनि कुनै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाइ चाहिँ । किनकी हिजो तत्कालीन एमाले र माओवादि पनि एकअर्काका दुष्मननै भएर लडेका हुन् नि । पछि समाजवादको सिद्धान्त लिएर दुवै पार्टि एक भयो । भोली भविष्यमा पनि एक नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले राजनितीमा टुटफुट भन्ने कुरा भइरहन्छ ,यसले निम्ताएको चुनौतीहरु पनि सामना गर्दै अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाईं ओली पक्षको समर्थन गर्ने नेता । के साँच्चै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्सद विगठन गरेर ठिक गर्नु भएको हो त ? कि आफुलाइ मन परेको मान्छे भएर अन्धो समर्थन गर्नु भएको तपाईँले ?
एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो तपाईंले । वास्तवमा सामान्य हिसावले एक सचेत नागरीक भएर हेर्दा संसद विगठन गर्नु अनुचित कार्य हो । जनताले दुइ तिहाइ मत दिएर ठुलो आशा राखेको बाम गठवन्धन बाट बनेको सरकार हारेको हो कि , काम गर्न नसकेर हात उठाइदिएको हो कि भन्ने शंङ्का गर्ने थुप्रै शुविधाहरु छन् । तर देखेका सबै कुराहरु सत्य हुँदैनन् । यसलाई हेर्ने दुइवटा पाटाहरु छन् । सरल रुपले केपी ओलीले संसद विगठन गरेको देखिन्छ । तर अर्को पाटोबाट एक विवेकशिल नागरीक भएर हेर्नुहुन्छ भने पार्टिले असहयोग गरेर नै आज संसद विगठन गर्नु पर्ने वाध्यता आएको हो । सरकार चलाउने एक जना ओलीले मात्र होइनन् । पार्टिको निर्देशनलाइ पनि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ । दुइ तिहाइ मत पाएको नेकपाका अधिकांश नेताहरु संसदमा समावेश छन् ।प्रधानमन्त्रीले हरेक निर्णय लिँदा संसदमा छलफल गरेर मात्रै पारीद गर्न मिल्ने प्रावधान छ । तर विकास निर्माणको काममा तिनले सहयोग गरेनन् । ओलीले व्यक्तीगत प्रायोजनका लागी कुनै निर्णय लिएको भए पो असहयोग गर्दा पनि देशलाइ पनि फरक पर्दैन तर विकास निर्माणमा त सहयोग गर्नु पर्ने हो नी । त्यो पनि नभएपछि उनले काम गर्न पाएनन् र संसद विगठन गर्नु पर्ने बाध्यता आइपर्यो ।
विकास निर्माणकै लागी हो भनेर ठोकुवा गर्न त कहाँ सकिन्छ र सचिवज्यु ?
आधारहरु प्रशस्तै छन् नि । यस भन्दा अघिको विकासमा तपाईंले केहि फरक पाउनु भएको छैन र ? पारदर्शि विकास भएका छन् नि । जनताले देखेका छन् ति कामहरु । हुन त यो सब पार्टि एक नभइदिएको भए सम्भव हुने थिएन होला । तर केहि हदसम्म चालकमा पनि भर पर्छ सवारी सकुशल गन्तव्यमा पुर्याउने कि कहिँ कतै दुर्घटना गरीदिने भनेर । प्रधानमन्त्री हालसम्म राम्रैसँग अघि बढ्नु भएको देखिन्छ । यद्यपी चुनावको घोषणा भइहाल्यो क्यार । एकपल्ट जनता कतिको सन्तुष्ट छन् भनेर जाँच गरौ न । के फरक पर्ला र ?
यसपश्चात उहाँको गन्तव्य आइपुग्यो । यद्यपी धेरै प्रश्न र कौतुहुलताहरु थाँती राखेर उहाँसँग विदा भइयो । फेरी कुनैदिन मौका मिल्यो भने ति थाँती राखिएका प्रश्नहरुको जवाफ लिनु छ ।